ဝင်းပစိုပြည်တဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ မီးဖိုချောင်ထဲက လျှို့ဝှက်မိတ်ဆွေလေးများ -
ဝင်းပစိုပြည်တဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ မီးဖိုချောင်ထဲက လျှို့ဝှက်မိတ်ဆွေလေးများ
Posted on February 1, 2019 Author Ei Thu	Comment(0)
အွင်း.. မျက်နှာပေါ်ပဲ ရောက်မလား… ပါးစပ်ထဲပဲ ရောက်မလား မသဲကွဲသော… 😀
ယောင်းလေးတို့ရေ . . . နူးညံ့စိုပြည်ပြီး ကြည်လင်နေတဲ့အသားအရေဟာ ဘယ် Makeup Look နဲ့ မဆို အဆင်ပြေစေမယ့် အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခု ဆိုတာ ယောင်းတို့ သိထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ တကယ်တော့လေ မိန်းကလေးနဲ့ Skincare ဆိုတာ လုံးဝကို ခွဲခြားထားလို့ မရတဲ့အရာလို့တောင် ပြောလို့ရမယ် ထင်တယ်နော်.. နဂိုအသားအရေလေးသာ ကြည်လင်နေမယ်ဆို ထသွား ထလာ အပြင်ထွက်တဲ့အခါ မိတ်ကပ်ထူထူကြီးတွေ၊ ကွန်ဆယ်လာတွေ သုံးနေစရာမလိုဘဲ Sun Protection cream လေး လိမ်း ၊ Compact ပေါင်ဒါလေး နည်းနည်း ပုတ်လိုက်ရုံနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ရှိရှိ အပြင်ထွက်နိုင်မှာ ကျိန်းသေပဲပေါ့… ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ယောင်းလေးတို့ ဝင်းပစိုပြည်တဲ့ အသားအရေလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ (ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာစွာနဲ့) အိမ်မှာတင် Skincare ပြုလုပ်နိုင်မယ့် မီးဖိုချောင်ထဲက လျှို့ဝှက်မိတ်ဆွေလေးတွေ အကြောင်း ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ဝက်ခြံတွေကို အထိရောက်ဆုံး တိုက်ဖျက်ပေးမယ့် “သံပုရာသီး”
ယောင်းရေ . . သံပုရာသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ အချဉ်ဓာတ်က အသားအရေကို ကြည်လင်စေပြီး ချောမွေ့စေပါတယ်။ သံပုရာရည် အနည်းငယ်ကို ဂရစ်ဆလင်းလေး နည်းနည်းရော၊ သမအောင်မွှေပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ မိနစ် ၂၀လောက် လိမ်းထားပေးမယ်ဆိုရင် ယောင်းတို့မျက်နှာပေါ်က အမည်းစက်လေးတွေနဲ့ ဝက်ခြံလေးတွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ပတ်တစ်ခါလောက် လိမ်းပေးလို့ ရပါတယ်နော်..
Related Article >>> နှစ်သစ်မှာ မဖြစ်မနေ ပြောင်းလဲပေးသင့်တဲ့ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းခြင်း နည်းလမ်း
မျက်နှာပေါ် ကပ်ငြိနေတဲ့ အညစ်အကြးတွေကို အဆုံးစွန်ထိ သန့်စင်ပေးမယ့် ခရမ်းချဉ်သီး
ယောင်းရေ . . . ယောင်းတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ခရမ်းချဉ်သီးစားရင် အသားအရေလှတယ် များများစားလို့ လူကြီးတွေ ပြောတာကို မကြာခဏ ကြားဖူးကြမှာပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးကို စားလို့ ရရုံတင် မကပါဘူး၊ ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး မျက်နှာပေါ်ကို ပွတ်တိုက်ပေးမယ်ဆိုရင် အဆီပြန်ခြင်းကို သက်သာစေနိုင်မယ့်အပြင် လေထုထဲကနေ တစ်ဆင့် ယောင်းလေးတို့ မျက်နှာမှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ ဖုန်မှုန့်၊ အညစ်အကြေးတွေကို အရေပြားအောက်ဆုံးလွှာထိ သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေကိုလည်း တင်းတင်းရင်းရင်း ရှိစေလို့ မကြာခဏ ပွတ်တိုက်ပေးဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ ပွတ်တိုက်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းလည်း ရေနဲ့ ချက်ချင်း မဆေးချဘဲ ၅ မိနစ်လောက် လိမ်းထားပေးလို့ရပါတယ် ယောင်းရေ။
Related Article >>> ကိုယ့်အသားအရေကို မသိမသာနဲ့ထိခိုက်စေတဲ့ အကျင့် (၅) ခု
အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တားဆီးပေးမယ့် ပန်းသီး
ယောင်းရေ . . . ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့သူတွေက ပြောကြတယ် . . . ပန်းသီးကို တစ်နေ့တစ်လုံး ပုံမှန်စားပေးမယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်ပါသတဲ့။ အက်ဒ်မင်က နောက်တစ်ခု ထပ်ပြောချင်သေးတယ် ၊ ပန်းသီးအတွင်းသားလေးတွေကို မျက်နှာပေါ် ပွတ်လိမ်းပြီး မိနစ် ၂၀လောက် ထားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းလေးရဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုတွေကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ကဲ . . . ယောင်းတို့ရေ အပေါ်မှာ ပေးထားတဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုရင် အချိန်ကုန်လည်း သက်သာသလို ကုန်ကျစရိတ်လည်း သက်သာစေမှာပါ။ တစ်ခုရှိတာကလေ.. သူများနဲ့ ဘယ်လောက် အဆင်ပြေပြေ၊ ကိုယ့်အသားနဲ့ မတည့်ရင် ဒုက္ခရောက်နိုင်တာမို့ ဒီနည်းလမ်းတွေ စမ်းသပ်မယ်ဆိုရင် နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှသာ လုပ်ကြပါလို့…
ယောင်းလေးတွေ လှသည်ထက် လှစေကြဖို့ ဆန္ဒပြုရင်း . . .
အိသူ (For Her Myanmar)
အှငျး.. မကျြနှာပျေါပဲ ရောကျမလား… ပါးစပျထဲပဲ ရောကျမလား မသဲကှဲသော… 😀
ယောငျးလေးတို့ရေ . . . နူးညံ့စိုပွညျပွီး ကွညျလငျနတေဲ့အသားအရဟော ဘယျ Makeup Look နဲ့ မဆို အဆငျပွစေမေယျ့ အခွခေံလိုအပျခကျြတဈခု ဆိုတာ ယောငျးတို့ သိထားပွီးသားဖွဈမှာပါ။ တကယျတော့လေ မိနျးကလေးနဲ့ Skincare ဆိုတာ လုံးဝကို ခှဲခွားထားလို့ မရတဲ့အရာလို့တောငျ ပွောလို့ရမယျ ထငျတယျနျော.. နဂိုအသားအရလေေးသာ ကွညျလငျနမေယျဆို ထသှား ထလာ အပွငျထှကျတဲ့အခါ မိတျကပျထူထူကွီးတှေ၊ ကှနျဆယျလာတှေ သုံးနစေရာမလိုဘဲ Sun Protection cream လေး လိမျး ၊ Compact ပေါငျဒါလေး နညျးနညျး ပုတျလိုကျရုံနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျမှု ရှိရှိ အပွငျထှကျနိုငျမှာ ကြိနျးသပေဲပေါ့… ဒါကွောငျ့ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ ယောငျးလေးတို့ ဝငျးပစိုပွညျတဲ့ အသားအရလေေးတှကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျစဖေို့ (ငှကေုနျကွေးကြ သကျသာစှာနဲ့) အိမျမှာတငျ Skincare ပွုလုပျနိုငျမယျ့ မီးဖိုခြောငျထဲက လြှို့ဝှကျမိတျဆှလေေးတှေ အကွောငျး ပွောပွပေးခငျြပါတယျ။
ဝကျခွံတှကေို အထိရောကျဆုံး တိုကျဖကျြပေးမယျ့ “သံပုရာသီး”
ယောငျးရေ . . သံပုရာသီးမှာ ပါဝငျတဲ့ အခဉျြဓာတျက အသားအရကေို ကွညျလငျစပွေီး ခြောမှစေ့ပေါတယျ။ သံပုရာရညျ အနညျးငယျကို ဂရဈဆလငျးလေး နညျးနညျးရော၊ သမအောငျမှပွေီး မကျြနှာပျေါမှာ မိနဈ ၂၀လောကျ လိမျးထားပေးမယျဆိုရငျ ယောငျးတို့မကျြနှာပျေါက အမညျးစကျလေးတှနေဲ့ ဝကျခွံလေးတှကေို သကျသာပြောကျကငျးစနေိုငျပါတယျ။ တဈပတျတဈခါလောကျ လိမျးပေးလို့ ရပါတယျနျော..
Related Article >>> နှဈသဈမှာ မဖွဈမနေ ပွောငျးလဲပေးသငျ့တဲ့ အသားအရေ ထိနျးသိမျးခွငျး နညျးလမျး
မကျြနှာပျေါ ကပျငွိနတေဲ့ အညဈအကွးတှကေို အဆုံးစှနျထိ သနျ့စငျပေးမယျ့ ခရမျးခဉျြသီး
ယောငျးရေ . . . ယောငျးတို့ ငယျငယျတုနျးက ခရမျးခဉျြသီးစားရငျ အသားအရလှေတယျ မြားမြားစားလို့ လူကွီးတှေ ပွောတာကို မကွာခဏ ကွားဖူးကွမှာပါ။ ခရမျးခဉျြသီးကို စားလို့ ရရုံတငျ မကပါဘူး၊ ထကျခွမျးခွမျးပွီး မကျြနှာပျေါကို ပှတျတိုကျပေးမယျဆိုရငျ အဆီပွနျခွငျးကို သကျသာစနေိုငျမယျ့အပွငျ လထေုထဲကနေ တဈဆငျ့ ယောငျးလေးတို့ မကျြနှာမှာ ကပျငွိနတေဲ့ ဖုနျမှုနျ့၊ အညဈအကွေးတှကေို အရပွေားအောကျဆုံးလှာထိ သနျ့စငျပေးနိုငျပါတယျ။ အသားအရကေိုလညျး တငျးတငျးရငျးရငျး ရှိစလေို့ မကွာခဏ ပှတျတိုကျပေးဖို့ မမနေဲ့နျော။ ပှတျတိုကျပွီးတဲ့အခါတိုငျးလညျး ရနေဲ့ ခကျြခငျြး မဆေးခဘြဲ ၅ မိနဈလောကျ လိမျးထားပေးလို့ရပါတယျ ယောငျးရေ။
Related Article >>> ကိုယျ့အသားအရကေို မသိမသာနဲ့ထိခိုကျစတေဲ့ အကငျြ့ (၅) ခု
အရှယျမတိုငျခငျ အိုမငျးရငျ့ရျောမှုကို တားဆီးပေးမယျ့ ပနျးသီး
ယောငျးရေ . . . ဆေးဘကျဆိုငျရာ တတျကြှမျးနားလညျတဲ့သူတှကေ ပွောကွတယျ . . . ပနျးသီးကို တဈနတေ့ဈလုံး ပုံမှနျစားပေးမယျဆိုရငျ ကနျြးမာရေးအတှကျ အထောကျအကူ ဖွဈပါသတဲ့။ အကျဒျမငျက နောကျတဈခု ထပျပွောခငျြသေးတယျ ၊ ပနျးသီးအတှငျးသားလေးတှကေို မကျြနှာပျေါ ပှတျလိမျးပွီး မိနဈ ၂၀လောကျ ထားပေးမယျဆိုရငျတော့ ယောငျးလေးရဲ့ ငယျရှယျနုပြိုမှုတှကေို ထိနျးသိမျးပေးနိုငျပါတယျ။
ကဲ . . . ယောငျးတို့ရေ အပျေါမှာ ပေးထားတဲ့ နညျးလမျးလေးတှနေဲ့ အသားအရေ ထိနျးသိမျးမယျဆိုရငျ အခြိနျကုနျလညျး သကျသာသလို ကုနျကစြရိတျလညျး သကျသာစမှောပါ။တဈခုရှိတာကလေ.. သူမြားနဲ့ ဘယျလောကျ အဆငျပွပွေေ၊ ကိုယျ့အသားနဲ့ မတညျ့ရငျ ဒုက်ခရောကျနိုငျတာမို့ ဒီနညျးလမျးတှေ စမျးသပျမယျဆိုရငျ နားလညျတတျကြှမျးတဲ့ ဆရာဝနျတှနေဲ့ တိုငျပငျပွီးမှသာ လုပျကွပါလို့…
ယောငျးလေးတှေ လှသညျထကျ လှစကွေဖို့ ဆန်ဒပွုရငျး . . .
Tagged Apple, Beauty, Fruit, Lime, Tomato
ယောင်းတို့ရေ . . . ကိုယ့်​နာမည်​ကတော့ အိသူ ပါ။ ပွင့်​ပွင့်​လင်းလင်းပြောရရင်​ ကိုယ်​က အားလပ်​ချိန်​တိုင်း အတွေးရေယဉ်​ကြောမှာ မျောရင်း၊ သဘာဝတရားကြီးရဲ့ အလှအပကို ခံစားရင်း၊ လသာတဲ့ညတွေမှာ လမင်းကြီးကို ငေးမောရင်း ရသစာပေတွေကို ဖန်​တီး ပုံဖော်​ချင်​တဲ့သူ တစ်​ယောက်​ပေါ့။ အခုကစပြီး For Her Myanmar မှာ ယောင်းလေးတို့နဲ့အတူ ခံစားချက်​လေးတွေမျှဝေရင်း၊ ဗဟုသုတတွေ အတူ ရှာဖွေနှီးနှောရင်း ၊ ရင်​ဘတ်​ချင်းနီးစပ်​တဲ့ သူငယ်​ချင်းကောင်း၊ တိုင်​ပင်​ဖော်​တိုင်​ပင်​ဖက်​တွေ အဖြစ်​ အချိန်​အကြာကြီး အတူရှိသွားချင်​ပါတယ်​။ Let me be your trusted friend! <3
Posted on March 29, 2019 Author Hnin Ei Oo
အုတ်ရောရော၊ ကျောက်ရောရောပဲမလား သိနေတယ် 😂😂😂😂
သူမဟာ (၂)ပတ်အတွင်း ဗိုက်ချပ်အောင် ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်။
Posted on March 9, 2017 March 9, 2017 Author
ဗိုက်ပူတာ သိသာမှာစိုးလို့ တစ်ခါတစ်လေ အသက်ရှူအောင့်ပြီး ဗိုက်ချပ်ထားတတ်တယ်ဟုတ်။ ဟုတ်ရင်ဝင်ဖတ်။
Posted on April 12, 2017 Author Jasmine
ဟိတ်သင်္ကြန်မှာလည်မယ့် ယောင်းလေးတွေ ပါလား။ ဒါဆိုရင် သင်္ကြန်အတွက် အထူးသီးသန့် မိတ်ကပ်လိမ်းနည်းကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်
စုံထောက်ဝတ္ထုကောင်း နှစ်သက်သူတိုင်းအတွက် ရန်အောင်ရတနာဝတ္ထု
ရွှေအိုရောင် အသားအရေပိုင်ရှင်တို့နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး အသားရောင် နှုတ်ခမ်းနီ (၆) မျိုး